ओलीलाई ‘लुरे’ प्रधानमन्त्री भन्दै गगन थापाले भने - जनताले सरकारबाट सुरक्षाको के अपेक्षा गर्ने ? Canada Nepal
ओलीलाई ‘लुरे’ प्रधानमन्त्री भन्दै गगन थापाले भने - जनताले सरकारबाट सुरक्षाको के अपेक्षा गर्ने ?
फाल्गुण १८ २०७७
काठमाडौं - नेपाली काँग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीको कुनै ठेगान नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार सर्लाहीको धनकौल बजारमा आयोजित आमसभामा बोल्दै थापाले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ओलीलाई ‘लुरे’ प्रधानमन्त्रीको संज्ञा पनि दिएका छन् ।
सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफुमाथि शारीरिक हमला हुनसक्ने बताउदै आफूमाथि ज्यान मार्नेसम्मको प्रयास भएको संकेत गरेका थिए ।
ओलीको सोही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्दै थापाले ओलीलाई ‘लुरे’ प्रधानमन्त्रीको भनेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो ज्यान असुरक्षित रहेको कुरा गर्दा जनताले यो सरकारबाट सुरक्षाको के अपेक्षा गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
थापाले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु लज्जास्पद रहेको पनि बताएका छन् । पदकै कारण नेकपामा भाँडभैलो मच्चिएको बताउदै थापाले अब काँग्रेस सरकारमा जाने हतार नगरी संविधान रक्षाको लागि उभिनु ठिक हुने बताए ।
फाल्गुण १८, २०७७ मंगलवार २०:०६:१८ बजे : प्रकाशित